Xildhibaanada federaalka ee Puntland iyo wasaaradda waxbashada oo ka heshiiyay muranka shahaadada dugsiyada sare – Kalfadhi
Qaar ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaan doorasheedka Puntland ayaa maanta la kulmay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ah mudane Cabdullahi Goodax Bare oo ay kala hadleen helitaanka ardayda Puntland ee shahaadada dugsiyada sare ee DFS.
Kulankan ayaa ka dhashay hakad ku yimid helitaanka shahaadada ee ardayda ka qalin-jebiyay dugsiyada sare ee Puntland oo murankeedu socday beryahan, maadama Puntland iyo DFS ay bilihii Abriil iyo May si adag isugu khilaafeen in wasaaradda waxbarashada federaalku maamusho imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare iyo kuwa dhexe ee Puntland.
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa ganafka ku dhufatay arrintaas.
Xildhibaan Cabdirashiid Gaboobe oo ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta shaaciyay in xildhibaanada iyo wasiirku ay isku af-garteen xalinta muranka ka dhashay qaadashada shahaada ee ardayda imtixaanka ku galay Puntland. Ma uusan bixin faahfaahin dheeraad ah oo arrinta khusaysa.
“Waxaan rajaynayaa inaan ka mira dhalinno hawlaha aan sida wadajirka ah u bilownay oo ay kamid tahay in ardayda Puntland ay saamigooda ka helaan deeqaha waxbarasho” ayuu yiri Xildh. Gaboobe.
Wasiir Goodax iyo xildhibaanada maanta kulmay/Muqdisho
In ku dhow 16,000 oo arday ayaa sannadkan ka qalin-jebiyay dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee deegaankan. Puntland ayaana maamuli jirtay imtixaanka midaysan ee sannadkiiba mar la qaado teer iyo 2003dii.
Bulshada rayidka ah ee Puntland oo maanta ka hadlay xuquuqda ardayda ay u leeyihiin in ay helaan shahaadada federaalka ayaa ugu baaqay madaxweynaha jahuuriyadda inuu soo fara-geliyo arrintan. Waxayna ka digeen in waxbarashada iyo dadaalka ardayda la siyaasadeeyo.